कुन कुराले पचक्कै आकर्षित गर्छ? यस अवसरलाई अनावश्यक रूपमा हस्तान्तरण गरिएका कृतिहरू सिर्जना गर्न, धेरै वित्तीय खर्चहरू बिना धेरै आर्थिक छ। बेशक बायाँ वा पुरानो चीजहरू हुनेछन्। प्याचवर्क सिलाईको प्रविधिमा बनाइएका उत्पादनहरू एकमात्र घरेलु भूमिका र सजावटी दुवै खेल्न सक्छन्। तकियाबाट कम्बलबाट, सजावटका बच्चाहरुका लुगाहरू बाट पर्खाल माउन्ट ज्वालामुखी प्यानलहरू।
शुरुवातका लागि उद्धृत गर्दै - सामग्रीको छनौट र तयारी।
प्रायः प्रयोग गरिने कपास कपडाहरू छन्। क्यालोको, क्यालोको, साटन, लुगा वा प्यानलका लागि विभिन्न आवेदनहरू, साथसाथै स्वतन्त्र उत्पादनहरू - पर्दे, एप्रन, नपकिन्स, टेबलवाटहरू, आदि बनाइएका छन्। फीता, मुद्रित स्कार्फ, रेशम कपडाहरू उत्पादनको सजावटका लागि प्रयोग गरिन्छ ।
ऊनी कपडाले पनि उनीहरूको ठाउँ patchwork मा फेला पार्छ। तिनीहरू राम्रो आवरण र प्लड्सबाट बनाइएका छन्, असबाबवाला फर्नीचरको लागि क्याप्सन। बुना भयो कपडामा कम्तीमा प्रयोग गरिन्छ, यसको विस्तारताले उत्पादनको आकारलाई असर गर्न सक्छ।
काम गर्नुअघि, फलामहरू फैलिनु पर्छ, भुइँमा हाल्नु, गीला अवस्थामा लुगा लगाइयो।
शुरुवातका लागि प्याचवर्क - आवश्यक उपकरणहरू।
कामको लागि तपाईलाई आवश्यक पर्दछ: तीव्र कैंचीहरू, सरल पेंसिल, टेम्प्लेटका लागि गन्तव्य, शासक, कम्पास, च्याक वा क्यान्सरका लागि विशेष पेन्सिल।
शुरुवातका लागि उद्धृत गर्दै - काट्ने।
Patchwork सिलाईको प्रविधिमा, काटने को परिशुद्धता मुख्य बिन्दु मध्ये एक हो। एक सानो गल्तिले ढाँचाको उल्लङ्घनको नेतृत्व गर्नेछ र उत्पादनमा अनावश्यक उपस्थिति हुनेछ। यसकारण, सिलाईको लागि तयारीको लागि सबै सुझावहरू पछ्याउन महत्त्वपूर्ण छ।
टेम्पलेट एउटा आभूषण वा ढाँचाको सानो इकाई हो। मूलतः, patchwork कढाई मा, ज्यामितीय आंकडाहरु प्रयोग गरिन्छ, जो एक निश्चित अनुक्रम मा एकत्रित गरिन्छ। ढाँचा कार्डबोर्डबाट काटिएका छन्, तिनीहरूका आकारमा पहिले नै 0.5 सेन्टिमिटरसम्म 1 सेन्टीमिटर भन्दा बढीका लागि छुटहरू राखिएको छ (ऊतकको विच्छेदनमा निर्भर गर्दछ)। यदि उत्पादनले दोहोर्याउने ढाँचा समावेश गर्दछ भने, त्यसपछि टेम्पलेट प्रयोग गरी समाप्त फारममा यसको आकार अनुमान गर्न प्रयोग गरिदिन्छ।
जब काट्ने, यो धागा धागाको सही अनुपातमा ढाँचाहरू बाहिर राख्न महत्त्वपूर्ण छ। Quadrangular भागहरूको साथ, एक भागमा साझेदारी थ्रेडको दिशा पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्। यदि तपाईंको ढाँचा त्रिकोण वा हेक्सागोनलल हो भने, त्यसपछि साझेदारी थ्रेड फेन्ड्रिकुलर आधारमा राख्नुहोस्।
प्याचवर्क सिलाईको प्रविधि - भागहरु जोडने को तरिका।
पहिलो तरिका गत्ता इन्सर्ट्स प्रयोग गरेर भागहरू स्टप गर्न हो। यो गर्न को लागी, तपाईंलाई आवश्यक संख्या को आर्टकार्ड को एक टन को गत्ता देखि तैयार गर्न को लागी आवश्यक छ, जो सागर को लागि भत्ते को बिना कटौती को लागि एक पैटर्न हो। ग्यापबोर्ड सम्मिलित स्क्रैपसँग आवरण गरिएको छ । यो छाप लगाउने सीमानाको साथमा गरिन्छ - तिनीहरूले घुम्नका परिधिहरु संग सागर भित्ताहरुलाई बलियो पारेका छन्, कुकुरहरु लाई अतिरिक्त सिलाईहरु लाई फिक्सिंग गर्दछ। यस तरिकामा तयारी गर्दै, स्क्रैपहरू, तिनीहरू आभूषणको आकृतिमा वा सम्पूर्ण क्यानवासमा एकत्रित हुन्छन्। धब्बेहरू अनुहारहरू सँग जोडिएका हुन्छन्, जोड्ने सीमसँग सिमाई, गत्ते बिना समात्न। उत्पादन वा टुक्राको संयोजन पछि, अतिरिक्त सिचहरू खोलिएका छन् र ग्याबोर्ड इन्टरर्टहरू निकालिएका छन्।
दोस्रो मार्ग - सेम रेखाको साथ पिच्छे प्वाल लगाएर फलामहरू, र त्यसपछि सुत्ने सुईलाई सानो बारम्बार सिचको साथ अगाडि बढाउँछ। प्वाइन्टहरू बाहिरिएका छन्, सागरहरूको लागि भत्ताहरू एक छेउमा थिचिएको छ।
तेस्रो तरिका सिलाई मिसिनमा झण्डा पीस गर्नु हो। क्रमशः प्रत्येक जोडाहरू सिलाई पछि थ्रेड तोक्न नसक्ने, भागहरू पिडाहरू मा जोडामा राख्छन् र सिलाईको एक पातको छेउमा राखिएको एक एक।
ध्यान दिनुहोस्! सागरहरू - एक अनिवार्य प्राविधिक विधिलाई इस्त्री गर्दै, उत्पादनको उपस्थिति प्रदान गर्दै।
Patchwork को पाठ रङ योजनाहरू हुन्।
स्क्रैपहरू, कुकुरले एक रङ प्यालेटमा एकत्र गरे, कलाको वास्तविक काम हुन सक्छ। तथापि, शुरुवात needlewomen को लागि सबै भन्दा सजिलो को रंग ध्वनि तय गर्न को लागि यो गाह्रो छ। यसैले, यो एक रङ्ग को टुकड को चयन गर्न रङ व्हील को उपयोग गर्न को लागी बेहतर छ।
एक पुरातन रहस्य: यदि तपाईंले गल्ती गर्नुभयो र फ्यापको रंग रचनामा "चिल्लाउँछ", तपाइँ यसलाई ब्ल्याक थ्रेडसँग बन्द गर्न सक्नुहुनेछ। किनारामा म्याच इन्फिच गर्न वा साईकलको साथ जिगजग सिलाई बनाउन पर्याप्त छ।
शुरुका लागि क्विल्टिंग एक आकर्षक गतिविधि हो। मनोवैज्ञानिकहरूले तनाव पछि मानव मनोचिकित्सकमा यस प्रकारको सुईको फायदेमंद असर को देखेको छ।
प्लास्टिकको भोजनबाट। नास्ता खाना र एक मिठो टेबुल कसरी गर्ने?
Crochet: crochet, वर्णन र रोचक मोडेल
कसरी "Avito" मा विज्ञापन गर्न मा जानकारी को लागि
AMD वा इंटेल गेमिङ लागि - जो राम्रो छ? जो प्रोसेसर चयन गर्न?
Kalina। वोदका मा Tincture - एक दबाइ वा मादक पेय?
मार्गरेट बेउफोर्ट - टुडर वंश को आमा को असामान्य जीवन
पोस्ट-उपवास र खाना को अवधारणा। यो के हो?